simon khaya moyo on News24
ARTICLES RELATING TO SIMON KHAYA MOYO
Mnangagwa govt slams minister's 'unlawful and reckless' military comments
President Emmerson Mnangagwa's government has slammed as "unlawful" and "reckless" comments by Zimbabwe's deputy finance minister who said the army wouldn't allow MDC leader Nelson Chamisa to win elections.
Zimbabwe’s ruling Zanu-PF party is gearing up for its extraordinary congress that is set to take place on Friday in Harare.
Watch the official video of the sacking of Zimbabwean Vice President Emmerson Mnangagwa from his post, as the battle to succeed President Robert Mugabe intensifies within the ruling Zanu-PF party.
Zanu-PF youths warn cabinet ministers
Zimbabwe's ruling Zanu-PF youth league has warned cabinet ministers opposed to the "one-million-men march", which is meant to “solidify” President Robert Mugabe’s leadership, reports say.
Zimbabwe's ruling Zanu-PF to act on social media
Zimbabwe's ruling party Zanu- PF is set to meet to discuss the negative use of social media by party members who are allegedly using it to attack other party members,
Zimbabwe’s ruling party has accused MDC leader Morgan Tsvangirai of “hijacking” the abduction of a pro-democracy activist in a bid to drum up support for the opposition, a report says.
Mugabe slowly sheds pariah image as he turns 91
Zimbabwean President Robert Mugabe has turned 91, showing no sign of giving up power as the West slowly eases pressure on a man who has been an international pariah for the last decade.
Zim’s ruling Zanu-PF party expels top official in purge
Zimbabwe’s ruling party has expelled a former top official and ally of President Robert Mugabe, the party says, in an apparent purge targeting allies of ex-deputy president Joice Mujuru.
Scandal over leaked data hits Zimbabwe's election
A scandal over leaked data has hit Zimbabwe's election after the ruling party sent personalised, unsolicited campaign messages to potential voters' mobile phones.
Zimbabwe's new government is taking steps to differentiate himself from his ousted mentor, Robert Mugabe, as he tries to win over the country before next year's elections.
Mnangagwa's ouster 'linked to Mugabe's fast deteriorating health'
The expulsion of former vice president Emmerson Mnangagwa from both the ruling Zanu-PF and government "was linked to President Robert Mugabe’s fast deteriorating health", a report says.
President Robert Mugabe's ruling Zanu-PF party has reportedly remained mum after the ANC this week moved to call on the Zimbabwean leader to stop attacking Nelson Mandela's legacy.
Zanu-PF bans social media abuse as Mugabe blasts feuding party bigwigs
Following an intense politburo meeting on Wednesday, Zimbabwe's ruling Zanu-PF party has reportedly banned the abuse of social media by party members, saying that anyone who did not adhere to the rules would be dealt with.
Bullies of this world must have trembled to hear Mugabe speak – Zanu-PF
Zanu-PF has reportedly hailed President Robert Mugabe’s speech at the UN General Assembly this week, saying it was "timely and eloquent" adding that "the bullies of this world must have trembled" to hear him speak.
Two former allies of Zimbabwean President Robert Mugabe whom he fired last year are suing the 91-year-old leader and his Zanu-PF party for unfair dismissal and for breaching the party’s constitution.
The official Herald newspaper in Zimbabwe has published a special 91st birthday supplement, thick with congratulatory messages to one of Africa’s oldest presidents Robert Mugabe.
Zim-EU relations 'to remain frosty over Mugabe travel ban'
Zimbabwean Finance Minister Patrick Chinamasa has reportedly said that relations between Zimbabwe and the EU will remain frosty until a travel ban on President Robert Mugabe and his wife, Grace, is lifted.